Gurukota rezvekushanyirwa munyika rozvibatsira nenzvimbo yakachengetedzwa - The Zimbabwean
Gurukota rezvekushanyirwa munyika rozvibatsira nenzvimbo yakachengetedzwa
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa nekugamuchirwa kwevashanyi munyika vaWalter Muzembi ndivo mumwe wevakabatsirikana nekupihwa mvumo yekushandisa nzvimbo inochengetedzwa mhuka zviri kukonzera nyonganyonga, pepanhau reZimbabwean razivisa.
Mugwaro rinoratidza varidzi venzvimbo dzinochengeterwa mhuka rakanyorwa musi wa 15 Chikumi 2011, vaMzembi vakaitwa muridzi wenzvimbo yeEaglemont kuMasvingo kubva muna 2008 kusvika muna 2033. Gwaro iri rinoti vane mahekita zviuru gumi netanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nemashanu avakagovana neanonzi Noel Farai. Izvi zvinovaita mumwe weavo vakawana chikamu chikuru pane vakawana rubatsiro zvisina tsarukano rwenzvimbo yakachengetedzwa iyi, chiitiko chashoropodzwa nenyika zhinji dzekunze.
Dzimwe nyika dzinoti nzira yekuba iyi inoputsa zvisungo zvakaitwa neZimbabwe maererano nekuchengetedza pfuma yevanenge vaisa mari munyika uye zvekuchengetedzwa kwemidziyo yevanhu munyika, sangano reEU richiratidza tarisiro yekuwedzeredza zvirango zvehupfumi. VaMzembi vanga vari pamberi pekutsoropodza kutorwa kwenzvimbo dzakachengetedzwa munyika nevamwe vavo mubato reZanu (PF) vachiti zvinodzinga vashanyi nekusvibisa zita renyika.
Masvingo ine nzvimbo makumi matanhatu nepfumbamwe dzakapihwa kuvatsigiri veZanu (PF), uye makumi maviri nemana dzichiwanikwa kuMidlands uye nomwe kumaodzanyemba nekuchamhembe kwematunhu eMatabeleland. Vakapihwa nzvimbo idzi vakanzi varipe mazana maviri emadhora. Magwaro aya haatsananguri kuti nzvimbo idzi dzakawanikwa sei uye kuti varidzi vadzo vakatorerwa vacharipwa here.
VaMzembi vari kushoropodzwa nevamwe vavo mubato kunyanya vari muMasvingo vari kuvati mutengesi. Kunze kwavaMzembi, pane vakuru vakuru mubato reZanu (PF) vakadomwa kuti vakabatsirikana nenzvimbo iyi. Vamwe vavo vanoti Gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaEmmerson Mnangagwa vakawana mahekita zviuru zvitanhatu nemazana maviri negumi papurazi reMoreena, panochengetedzwa zvipembere zvitema, aimbove mutevedzeri wegurukota vaObert Matshalaga vakawana zviuru zviviri zvemahekita kuchamhembe kwepurazi rakaganhurwa reShangani, Gurukota rinotungamirira dunhu VaMachaya, vane zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi matanhatu nemasere papurazi rePitscottie navaCephas Msipa, vaimbove gurukota rematunhu vaine zviuru zvitatu nemakumi mana nematatu kuchamhembe kweShangani, munzvimbo inochengeterwa zvipembere zvitema zvakare.
Mukuru mukuru mubato reZanu (PF), vaJuly Moyo, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJohn Nkomo, Joshua Malinga, mutsigiri mukuru webato anobva kuManicaland vaEnock Porusingazi, vaJohannes Tomana nemukuru mukuru muchiuto VaEngelbert Rugeje vakadomwawo murugwaro urwu sevakabatsirika.
Gurukota redunhu reMasvingo vaTitus Maluleke, vaimbove gurukota, vaJosiah Hungwe, mai Shuvai Mahofa navaMunyaradzi Paul Mangwana vari musangano rinoona nezvekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo nemutungamiriri wemadzishe vaFortune Charumbira vakawanawo zvikamu munzvimbo idzi.
Vazhinji vakabatsirika nenzvimbo iyi vari pezvirango zveEU, asi dai sangano iri raienderera mberi nekuisa vanhu vose ava pazvirango izvi, vanhu vemuZanu (PF)vari pazvirango vaibva vawandisa.
Gwaro remazita evakabatsirika ava rinoratidza kufanana kwemazita ekupedzesera evanhu ava nemadzishe uye nevemubato reZanu (PF) zvichiratidza kuti pakawanda chizivano nehuori mukupihwa kwemvumo yekushandisa nzvimbo idzi kuvanhu.
Mamwe mazita ekupedzesera anonyanyoonekwa pamagwaro aya anosanganisira ekwaMaluleke, Baloyi neHungwe kubva kuMasvingo neekwa Nkomo kubva kumaodzanyemba nekuchamhembe kweMatabeleland.
Masvingo ndiyo ine vazhinji vakabatsirikana nemvumo yekushandisa nzvimbo dzinoti; yekuchengetera mhuka yekumaodzanyemba kweChifedzi, Bedford, Masapasi, Mkwasine, Eaglemont, Humani, Bubye Impala nenzvimbo yakachengetedzwa yeWanezi.
Kunyangwe paine kukavadzana nezvenzvimbo dzakachengetedzwa idzi, gurukota rinoona nezvekushengetedzwa kwakanaka kwenharaunda nezviwanikwa vaFrancis Nhema vakati vanhu havafaniri “kumutsa bongozozo pasina”. Vakati kubvutwa kwenzvimbo dzakachengetedzwa uku idanho rakatanga makore gumi nemaviri apfuura apo nyika yakavamba chirongwa chekugovera patsva ivhu kuvanhu.
“Mumashure ma2000, nzvimbo dzakachengetedzwa idzi dzaiva dzevanhu vashoma shoma asi iye zvino dzapihwa kune veruzhinji,” vakadaro. “Izvi hazvishanduri kushanyirwa kwenyika nepadiki pose.”